Nin Somali ah oo Dil ka Gaystay Malta – Radio Daljir
Nofeembar 23, 2015 2:46 b 0
Somalia, November 23, 2015-(Daljir)-Muwaadinka Soomaaliga oo lagu magacaabo Mohamed Ibrahim Abdalla oo 19-jir ah ayaa la sheegay inuu si xun dhalo ugu dhaawacay Nin u dhashay Libya oo lagu magacaabo Miluud Elforjaani, kadib, markii ay Waaberigii hore ee shalay ku dagaalameen DeegaankaPaceville ee Jesiiradda Malta.
Mohamed Ibrahim Abdalla oo ku nool Deegaanka Marsaskala ayaa ka hor sheegay Maxkamadda inay soo weerareen afar nin oo Liibiyaan ah oo uu ka mid ahaa Miluud Elforjaani, kuwaasi oo sheegay inay doonayeen inay ka dhacaan Mobaylkiisa.
Iska horimaadkaasi oo dhacday xilli saq dhexe, waxa Muwaadinka Soomaaliga soo gaaray dhaawac fudud, halka ninka Liibiyaanka uu si xun ugu dooxay dhalo uu jabsaday.
Maxkamaddu, waxay amartay in labada nin lagu hayo Xabsiga, iyadoo uu Garsoore Gabriel Vella diiday in si damiin ah lagu sii daayey raggaasi is-dhaawacay, maadaama ay dhici karto inay ka baxsadaan Malta.
Amniga Magaalada Brussels oo Aad loo Adkeeyay